Rivo Rakotovao : Izay mahafeno fepetra no aoka hilatsaka -
AccueilRaharaham-pirenenaRivo Rakotovao : Izay mahafeno fepetra no aoka hilatsaka
06/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mazava ho azy fa tsy misy intsony ny “ni ni” na ny tsy famelana olona iray hilatsaka amin’ ny fifidianana izay ho filohan’ny repoblika amin’ny taona ho avy, manaiky izany rahateo ny mpitondra ankehitriny satria natao ho an’ny rehetra ny fifidianana sy ny firotsahana. Mbola namerina nanazava io tranga io hatrany i Rivo Rakotovao omaly nandritra ny fandraisany ny masoivoho britanika tetsy amin’ ny lapa maitso Anosikely “ rehefa miresaka ny ni ni isika dia taitra avokoa ny rehetra”, ary mbola nampiany ihany hoe tany aloha dia samy afaka ny rehetra, satria nisy ny fifanarahana politika “ankehitriny kosa dia tsy izany intsony , satria afaka mirotsaka avokoa ny rehetra, rehefa mahafeno ny fepetra takian’ ny lalàna” hoy hatrany i Rivo Rakotovao. Raha ny voalazan’ny lalàna tokoa mantsy dia olona madio no tokony hitantana ny firenena, ary olona tsy nanao ratsy teto amin’ny firenena. Noho izany manana ny ambarany ihany koa i Rivo Rakotovao manoloana ny zava-misy tahaka izany “ maro ireo mpanao politika no nanao ny tsy nety tetsy sy teroa nefa mbola midongy ho kandida hatrany. Tsia. Raha mbola ekena ny firotsahan’izy ireny hofidiana dia miverina amin’ny fotoanan’ny Tetezamita indray isika “. Ampahatsiahivina hatrany raha niresaka mikasika ny fifidianana tamin’ny filohan’ny antenimieran-doholona ny masoivoho britanika ity, dia nambarany ny ezaka natao amin’ny fametrahana ny fitoniana mialoha, mandritra ary aorian’ny fifidianana. Ny masoivoho britanika moa izay maniry ny hisian’ny mangarahara sy malalaka amin’ny fifidianana izay ho avy rehetra.
Governemanta Mapar : Voasambotra izay maneho hevitra
Izany ve no olon’ny rantsan’ny firenena mikambana, tsy mandala ny demokrasia sy ny fahalalahana miteny. Amin’ny fotoanan’ny fifidianana tahaka izao dia malalaka ny fanehoan-kevitra, ary tsy tokony hosakanana na iza na iza. Ny zava-nisy anefa, ...Tohiny
Korontana volen’ ireo depiote : Ho avy indray ny iraky ny SADC